porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် - porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
UPDATE - အကယ်၍ သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူသည်ညစ်ညမ်းစေသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြေရှင်းသည့်ပညာရေးခရက်ဒစ်ကိုလိုချင်ပါက၎င်းတို့ကိုလေ့လာရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဒီသင်တန်း (ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်မပတ်သက်ပါ) ဗြိတိန်တွင်စဉ်းစားပါ ဒီသင်တန်း.
ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားနေရသောလူငယ်များမည်မျှရှိသည်ကိုအတိအကျသိရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကဖြစ်စဉ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်တာမလွယ်ပါဘူး။ (လင့်ခ်)
- Dr. Abraham Morgentaler၊ ဘော်စတွန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဟားဗတ်ဆေးကျောင်းရှိဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခ
ဤဖြစ်စဉ် Morgentaler အသစ်ခဲ့ကြပေမည်, သို့သော်အမေရိကန်ဆရာဝန်အထွေထွေ C. Everett Koop က MD ပြန်မေလတွင် 31, 1985 အပေါ်တစ်ဦးပြောရမှာလိပ်စာအတွက်ကအကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်:
“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ငါ“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်“ စွဲမြဲရှိနေခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အရာရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ပြီးတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ အချို့သောလူများအကြားအလုပ်မဖြစ်သောတုံ့ပြန်မှုကိုနှိုးဆွပုံရသည်။ ဒီဟာကဘယ်လောက်ပျံ့နှံ့နေတယ်၊ ​​ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သင့်တွင်အပြာ - လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED သို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အခက်အခဲများ) ရှိပါကပြtheနာသည်သင်၏လိင်တံတွင်မဟုတ်ပါ။ ဦးနှောက်။ နှင့်သုတေသနဒီအဖြစ်မှန်အတူတက်ဖမ်းရန်စတင်နေပါတယ်။ မြင် လိင်မှုကိစ္စပြuseနာများ၊ လိင်မှုကိစ္စပြsatisfactionနာများ၊ လိင်မှုကိစ္စပြsatisfactionနာများ၊ လိင်မှုကိစ္စနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်လေ့လာမှုများ. A ကောင်းဆုံးပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကဤစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယိုများ:
porn-သွေးဆောင် ED Reboot အကြံဉာဏ်ဗီလော့ဂ်: ဂါယူဆပါသည်
porn-သွေးဆောင် ED ပြန်လည်နာလန်ထူ (အဆိုပါနက်နဲသောအရာထောင့်ကွက် Show မှာကနောဧဘုရားကျောင်း)
အကြှနျုပျ၏ Erectile အလုပ်မဖြစ် Porn စေခဲ့သလား စမ်းသပ်မှုယူပါ! (ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်)
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် PIED ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏မရှိမဖြစ်အခြေခံ
PIED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်သူ၏လိင်ဖော်ထုတ်ထားသူတစ်ဦးနုပျိုလိင်တူချစ်သူလူ TEDx ဟောပြောပွဲ
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် "Porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ဟုတ်ပါတယ်, တကအစစ်အမှန်အရာပါပဲ)"
: အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာတင်ဆက် porn-သွေးဆောင် ED အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, အပိုင်း 3, အပိုင်း 4.
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် High-Speed ​​ကိုအင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ: porn-သွေးဆောင် ED သို့မဟုတ် porn-သွေးဆောင် fetishes နှင့်အတူလူပျိုတို့အလွန်သက်ဆိုင်သော။
ထို့နောက်“PIED ဒီမှာ STARTအခြေခံအများစုဖုံးလွှမ်းသော "ဆောင်းပါး။ PIED မှစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သင်သေချာစွာစစ်ဆေးပါ porn-related ED စမ်းသပ်.
ထို့နောက်သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ပြန်ဖွင့်အခြေခံ။ လူတိုင်းသိရန်လိုသည် ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါကူညီပါ!"အတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်"flatline။ "See အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် အကြံပေးချက်များ, အကြံပေးခြင်း, နှင့်အောင်မြင်စွာဆယ်ယူခဲ့ကြသူတို့ထံမှလှုံ့ဆျောမှု၏စာမကျြနှာအဘို့။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ဒီမှာပါ ရှည်လျားသော reboot များအတွက်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များ.
ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင်များအဘို့, ဆင်း scroll porn-သွေးဆောင် ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ။ ED ပြန်လည်နာလန်ထူနိုင်အောင် browse ၏ကြာကြာပိုပြီးအသေးစိတ်ပုံပြင်များများအတွက် ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page2နှင့် ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3။ အကြောင်းကို Read ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ကြီးထွားလာနံပါတ်များ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ကုသ porn-သွေးဆောင် ED နှင့် လုလင်တို့သည်ပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုများ ED နှုန်းထားများအတွက်တစ်ဦးချွန်ထက်မြင့်တက်လာသတင်းပို့။
ယင်းကိုကြည့်ပါ Porn မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများစာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်
ဖတ် ဂါယူဆပါသည် PIED ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ဘုံမေးခွန်းများကိုဖွကွေား.
PIED အကြောင်းသိသမျှအားလုံးသည်ဤစာမျက်နှာတွင်ရှိသည်။ porn-induced ED ၏ရှုထောင့်တိုင်းသည်ရောင်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအမြဲသတိရပါ။ သင်၏သမိုင်းနှင့်လက်ရှိရောဂါလက္ခဏာများပေါ် မူတည်၍ သင်မှန်ကန်မှုရှိသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ သင့်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Be ။
သင့်ရဲ့အခြေအနေတိကျတဲ့ YBOP စီမံခနျ့ခှဲသူမေးခွန်းများကိုမမေးကြဘူးပါ။ YBOP ဆေးဘက်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကွံဉာဏျရှာဖွေရေးမှာသို့မဟုတ်ပေးမထားဘူး။ YBOP ပြင်းပြင်းထန်ထန်သင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ, အစားအသောက်ချို့တဲ့, ဟော်မုန်းမညီမျှမှု, သို့မဟုတ်အခြားအော်ဂဲနစ်အကြောင်းတရားများထွက်အုပ်ချုပ်ဖို့အရည်အချင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေ့မြင်အကြံပြုထားသည်။
သင့်ဆရာ ၀ န်ကသင့်တွင်အော်ဂဲနစ် (ခါးပတ်အောက်) ပြissueနာမရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီး၊ သင်သည်“ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်” ခံစားနေရကြောင်းသင့်အားပြောလျှင်ဤအရာကိုဖတ်ပါ။ အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သူများက PIED မှစ. ဆင်းရဲဒုက္ခယောက်ျားများပြောပြပါ
ဒီမှာ START: Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (PISD / PIED)
ဘယ်လောက်ကြာက porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) မှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့ယူကြမည်နည်း
ကူညီပါ! ငါ porn ဖြတ်သော်လည်းငါ့အာနိသင်, လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ် (အဆိုပါ Flatline) လျော့ကျလာနေကြတယ်
ငါ၏အ ED porn-related လျှင်အဘယ်သို့ငါသိနိုင်မည်လဲ? (ကစမ်းသပ်ခြင်း)
ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှကျွန်ုပ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းသည်အချိန်ကြာလွန်းနေသည် - ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
PIED အပါအဝင် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတဲ့သူကျွမ်းကျင်သူများ,
ကို restart ကြသူဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ (သို့မဟုတ် Reboot လုပ်သွားကြပါပြီ) ။
porn-သွေးဆောင် ED: ကိုလက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားအငြင်းအခုံ
များစာရင်း လေ့လာမှုတွေ ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း / ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများ၊ နှိုးဆွမှုနည်းခြင်း၊
porn အသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြလေ့လာရေး ဖြစ်စေတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်:
လူနာသည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်နည်းခြင်းနှင့် anorgasmia (၂၀၁၄) မှပြန်လည်သက်သာလာသည်။
အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016) - လူနာ ၃၅ ယောက်သည်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည်
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - လူနာ ၃၅ ယောက်သည်လိင်မှုကိစ္စပြpornနာမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည်
ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017) - ညစ်ညမ်းသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုအကြောင်းဖော်ပြသော“ ပေါင်းစပ်အမှု” အကြောင်းအစီရင်ခံစာ။
အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) - အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိယောက်ျားသည်ညစ်ညမ်းသောသွေးအားနည်းရောဂါမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည်။
လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019) - စက္ကူကနာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကုသပေးသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပေးသောလူငယ်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။
ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden - လူ ၁၅ ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း။ အများအပြားက PIED & တင်းမာမှုဖော်ပြခဲ့သည်။ အမျိုးသားတစ် ဦး သည် porn အသုံးပြုမှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းဖြင့် PIED ကိုကုသခြင်းကိုဖော်ပြသည်။
အခြေခံများ - အသံနှင့်ဗွီဒီယိုတင်ဆက်မှုများများ
ရေဒီယိုပြရန်: Porn-သွေးဆောင် ED ၏အခြေခံ, ဂယ်ရီ Wilson ကအားဖြင့်
ရေဒီယိုပြရန်: ဂါယူဆပါသည်နှင့်အတူ2အင်တာဗျူးများ။ PIED, လိင်များအတွက်9လ (15 လအတွင်းပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်) ။
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) မှဘယ်လောက်ကြာ recover သလော နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
အဘယ်ကြောင့်လိင်ကြောင့်အကြီးအခံစားရဘဲနေရသနည်း (porn-သွေးဆောင် desensitization နှင့် DE), နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
ငါ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေ recover အဖြစ်ဘယ်လောက်ကြာကြာငါယနေ့အထိစောင့်ဆိုင်းသင့်သလဲ နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
PIED အောင်မြင်မှုပုံပြင်: သတ်သေ မှစ. အစဉ်အမြဲဖြစ်မယ့်အပျော်ရွှင်ဆုံးပါ! ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအသုံးပြုပုံ Porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် Beat မှမိန်းမတွေမှာအသုံးပြုခြင်း
ငါ၏အလိင်တံကိုအစဉ်အမြဲ ကပ်. နှင့်ထုံမညျနညျး (ထို nofap flatline) နောဧဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
ပုဏ္ဏားဒဏ္:ာရီ - Gabe Deem ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်ရှိအမှန်တရား
"ငါသည်ရုံ PIED ၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံရဖို့ချင်တယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးကောက်ရိုးဖြစ်၏။ "
ရေဒီယိုပြရန်: Young ကစိတ်ရောဂါအထူးကုသူ့ Porn-သွေးဆောင် ED ဆွေးနွေး
'Generation X-Rated' - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းကနေဒါ (Porn-inced ED)
ဗီဒီယို: ဆီးလမ်းကြောင်းအင်ဒရူး Kramer (porn-သွေးဆောင် ED အပါအဝင်) ED ဆြေးြေိံး
Charleston ၏ကောလိပ်: နောဧသည်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဒေါက်တာ Todd မတ်ေတာသညျ
အဘယ်ကြောင့် ယောက်ျားကအင်တာနက် Porn (porn-သွေးဆောင် ED) ဖြတ်နေကြတယ်
"ကမြင့်မားသောလိင် drive ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ် porn စွဲ Is?" နောဧကိုဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
ဘီစီဘီစီအမျိုးသမီးများနေ့သည်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအမျိုးသမီးများကြည့်ရှုသူများကို Neelam Tailor နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာကုသသူ Angela Gregory (2019) နှင့်ဆွေးနွေးထားသည်
"ကျနော့်ဦးနှောက် Up ကို Messed Porn": porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2019) မှပြန်လည်ကောင်းမွန်သူမော်ဒန်မန်း Podcast တခုကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းလုလင်ကို
ဂါယူဆပါသည် PIED ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ဘုံမေးခွန်းများကိုဖွကွေား
ကျွန်ုပ်တွင် ED ရှိပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါလော။
အဘယ်သို့ငါ (အစွန်း) masturbate သို့မဟုတ်အော်ဂဇင်မပါဘဲ porn ကိုကြည့်ပါလျှင်?
ငါသည်ငါ့ reboot ကာလအတွင်းအဘယ်အရာကိုလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်နည်း ငါပြန်သွားကြသည်ခဲ့သလား
တစ်ဦး relapse ငါ့ကိုပြန်မသတ်မှတ်ကြမည်နည်း
မကြာခဏသုက်လွှတ်၏ neurobiological သက်ရောက်မှုကဘာတွေလဲ?
PIED ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ် 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု' ကောအသို့နည်း။
အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့မဆိုအကြံပြုချက်များသုတ်ရည်လွှတ် (DE) သို့မဟုတ် anorgasmia နှောင့်နှေး?
ပြဿနာများ (စိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Syndrome) ကိုဖြစ်ပေါ်စေပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ်?
“ Venous Leak” ကောဘယ်လိုလဲ။
ငါဖြောင့်တယ်, ဒါပေမယ့် transsexual သို့မဟုတ်လိင်တူချစ်သူ porn (သို့မဟုတ်ဖြောင့်ညစ်ညမ်းစေရန်ဆွဲဆောင်လိင်တူချစ်သူ) အားဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာတွေထူးလဲ?
ငါ၏အ fetish porn-သွေးဆောင်လား?
ငါ asexual Am?
porn-သွေးဆောင် ED: အဘယျသို့အကြှနျုပျသရည်းစားပြောပြသလဲ?
Porn-သွေးဆောင် ED အပေါ် YBOP Blog ရေးသားချက်များ
အပိုဒ်: Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
"ငါသည် Porn-related Erectile အလုပ်မဖြစ်ထံမှပြန်လည်ပုံ"
Porn-Related ED ၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED 1 ၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED2၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED3၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED5၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED6၏ပုံပြင်များ
Porn-Related ED 8 ၏ပုံပြင်များ
ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1
ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 2
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 1
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 2
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 5
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 6
ED Recovery ကိုဇာတ်လမ်းများ 7
အနိမျ့ Dopamine သင်ျခြိုခုနှစ်တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏အံ့ဖွယ် Rethinking (ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံး)
အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက် Dopamine D2 receptors nonorganic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2018) ၏ကြွက်မော်ဒယ်အတွက် erectile function ကို modulate
Propecia (finasteride) နှင့်ပညာရေးနိမ့်လိင်စိတ်
Dopamine, testosterone နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်လေ့လာရေး
INTRO: သုတေသနနုပျို ED အတွက်ကြီးမားမြင့်တက်အတည်ပြု
18-40 နှစ်ပေါင်း (2010) အသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အချက်များ
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ (2012): လူပျိုတို့အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်
အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013 ။
အသစ်တွေ့ရှိသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်လူနာလေး ဦး တွင်တစ် ဦး သည်နေ့စဉ်လက်တွေ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုမှလူငယ်တစ် ဦး - စိုးရိမ်ဖွယ်ရာရုပ်ပုံဖြစ်သည်။
ဘိုးဘွားရိပ်သာအလယျပိုငျးနှင့်အသက်ကြီးအမျိုးသားများအကြားတွင် Asexuality ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (2014)
စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်းများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမည်: ပဏာမခန့်မှန်းချက်များနှင့်ခန့်မှန်း (2014)
လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် 18-25 နှစ် (2014) အသက်
လိင်အင်္ဂါကို Image, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပူပန်နှင့်လူငယ်အမျိုးသားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်း (2015) များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမှန်တည်သလား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ဆက်ဆံရေး, နှင့်လက်တွေ့ဆက်တင် (2015) တွင် compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဇီဝဗေဒဆက်စပ်မှု
အမျိုးသားအရွယ်ရောက် Entertainment များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်: တစ်ဦးကစစ်တမ်း (2018)
တစ်ဦးရီးရဲလ်-ဘဝက Cross-Section လေ့လာမှု (2018) ၏လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်-တွေ့ရှိချက်များထဲတွင် Erectile အလုပ်မဖြစ်သည်အချက်များ
လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်တွေထဲမှာလိင်အလုပ်မဖြစ်: Erectile အလုပ်မဖြစ် (2018) နှင့်အတူအစားအသောက် Components Associated ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ / ALTER လိင်စိတ်မှ Porn အသုံးပြုမှုချိတ်ဆက်ခြင်းလေ့လာရေး
အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
လေ့လာချက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများ (2016) နဲ့တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လေ့လာချက်: အထီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအလေ့အထများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2016)
လေ့လာချက်: အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014)
လေ့လာချက်: လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်
လေ့လာချက်: ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017)
လေ့လာချက်: လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019)
လေ့လာချက်: ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလိင်ကွဲအမျိုးသားများရဲ့အတွေ့အကြုံများ (2019): ရှက်ကြောက်ခြင်း Hidden
လေ့လာချက်: အမျိုးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု - တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (2003)
လေ့လာချက်: Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇) (Kinsey Institute သုတေသီများ)
လေ့လာချက်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2008) နဲ့လက်တွေ့တွေ့ဆုံ
လေ့လာချက်: နော်ဝေလိင်ကွဲစုံတွဲ (2009) ၏ကျပန်းနမူနာများတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း
လေ့လာချက်: ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring
လေ့လာချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, မ Hypersexuality, လိင်ပုံများ (2013) ကရူးနှမ်း Neurophysiological တုံ့ပြန်ချက်မှ Related သည်
လေ့လာချက်: နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2014) မပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
လေ့လာချက်: ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် (2014)
လေ့လာချက်: ရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ (2014)
လေ့လာချက်: 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2015): Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ
လေ့လာချက်: မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု (2015)
လေ့လာချက်: ပြimagesနာများရှိသူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များ၏နောက်ကျသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အလားအလာများကို 'porn စွဲ' မှုနှင့်မကိုက်ညီသောထိန်းချုပ်မှုများ (2015)
လေ့လာချက်: ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို
လေ့လာချက်: Erectile အလုပ်မဖြစ်, ပျင်းတာဟာနှင့်နှစ်ဦးကိုဥရောပနိုင်ငံများကနေစုံတွဲအမျိုးသားများအကြား Hypersexuality (2015)
လေ့လာချက်: ယောက်ျားရဲ့လိင်ဘဝနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှပြန်လုပ် Exposure ။ တစ်ဦးကနယူးပြဿနာ? (2015)
လေ့လာချက်: ပြောင်းလဲအစာစားချင်စိတ်အခြေအနေများနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆက်သွယ်မှု (2016)
လေ့လာချက်: ရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးဟာဒိုင်းနမစ်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှု (2016)
လေ့လာချက်: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ: ယောက်ျားတစ်နမူနာအတွက်ပြဿနာနှင့် Non-ပြဿနာအသုံးပြုမှုပုံစံများတစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2016)
လေ့လာချက်: "ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု
လေ့လာချက်: လုလင်တို့သည် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic အကြောင်းတရားများ
လေ့လာချက်: ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်လျှော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအကြား Associative လမ်းကြောင်း (2017)
လေ့လာချက်: တစ်ဦး Brno တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလေ့လာမှု (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ) အကြောင်းကိုစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိ: "တစ်ဦးဆက်ဆံရေး Killer အဖြစ် babyish" (2018)
လေ့လာချက်: အင်တာနက်ကိုခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2018)
လေ့လာချက်: သစ်ခမည်းတော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်နီးစပ်ခြင်းကိစ္စများ (2018)
လေ့လာချက်: Erectile လုပ်ငန်းဆောင်တာ Related ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုရှိပါသလား? Cross-Section နှင့်ငုပ်လျှိုးနေကြီးထွား Curve ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (2019) မှစ. ရလဒ်များ
လေ့လာချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူးအမည်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း (2019)
လေ့လာချက်: ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားများအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့မှု, ပုံစံများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ခံစားသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2019)
လေ့လာချက်: ဆွီဒင် 2017 (2019) တွင်လိင်နှင့်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးနှင့်အခွင့်အရေးများ
လေ့လာချက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: စွဲမှုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်? (2019)
လေ့လာချက်: Abstinence သို့မဟုတ်လက်ခံ? ကိုယ်ပိုင်ခံစားပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Addressing အနေနဲ့ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးနှင့်အတူယောက်ျားရဲ့အတွေ့အကြုံများတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်စီးရီး (2019)
လေ့လာချက်: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်းကသုတ်ရည်လွှတ်ချိန်ကိုထိခိုက်နိုင်သလား။ (၂၀၂၀)
လေ့လာချက်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အသုံးပြုသူများအတွေ့အကြုံအားလေ့လာခြင်း - အရည်အသွေးလေ့လာမှု (၂၀၂၀)
လေ့လာချက်: EAU 2020: ပိုဆိုးသော၊ ပိုမိုဆိုးရွားသည့် Erectile Function (၂၀၂၀)
လေ့လာချက်: ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း“ ပြန်လည်စတင်ခြင်း” အတွေ့အကြုံ - အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲဆိုခြင်းဖိုရမ် (၂၀၂၁) တွင် Abstinence ဂျာနယ်များ၏အရည်အသွေးဆန်းစစ်ချက်
လာမည့်လေ့လာမှုများ: urology ပါမောက္ခကဟောပြောပွဲများ၏ PDF ဖိုင်ရယူရန် Carlo Foresta (2014)
လေ့လာမှုအကြောင်းဆောင်းပါး - Erectile အလုပ်မဖြစ်ဖိုရမ်အမျိုးသားများအတွက်သန်းပေါင်းများစွာသောအခြေအနေကိုင်တွယ်ဘယ်လိုကုန်ကြမ်းဝိပဿနာထဲသို့ငှေပါ။ HuffPost (2015)
မီဒီယာအတွက် porn-သွေးဆောင် ED: အဓိကအားကျွမ်းကျင်သူများက
YBOP 2011 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကကျော် (ဇန်နဝါရီ, 130) လိုင်းပေါ် လာ. , ကတည်းကဝန်ခံနှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများပြုမူဆက်ဆံသူကို (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ဆောင်းပါးများထုတ်ဝေသို့မဟုတ်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်သည်ထင်ရှားပါပြီ။ မှတ်ချက်: ဆီးရောဂါပါရဂူအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသင်းနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံမှာညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အထောက်အထားနှစ်ကြိမ်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
Myth ဟာသို့မဟုတ်အမှန်တရား - အလွန်အကျွံ Porn စားသုံးမှု Erectile အလုပ်မဖြစ်စေနိုင်သလား? Takeesha Roland-Jenkins, က MS (2017) က
TEDx ဟောပြောချက်“ လိင်၊ စကားနှင့်ကျားမခြင်း” (ပါမောက္ခ Warren Binford, 2017)
သင်က Erectile အလုပ်မဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်မဘာလုပ်နိုင်။ Urology ပါမောက္ခအာရုန်သည် Spitz ။ (2017)
သင့်ရဲ့လိင်စိတ်ထိခိုက်နေဒါကငါးမကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကျင့်။ Zvi Zuckerman MD, CST (2018) က
Erectile အလုပ်မဖြစ်သွေးဆောင် porn - သင်သိရန်လိုအပ်အရာအားလုံး။ ဒံယလေသ Sher, Ph.D (2018) က
ငါ Porn စွဲ Am? ဒေါက်တာ Sue (2018) က
အမျိုးသားလိင်အလုပ်မဖြစ်အကြောင်း Porn စွဲပါသလား ဒေါက်တာရောဘတ် Weiss (2019) က
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Z ကို၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလိင်ဘဝတွေကို: သူတို့၏ '' လိင်မရှိခြင်း '' ပတ်သက်. စိတ္တဇနာထ add မထားဘူး။ ဒေါက်တာမဿဲ Berry ဟာ။ (2019)
"Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်?" ဒေါက်တာ Nazanin Moali နှင့်ကုထုံး Wendy Maltz (2019)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှတဆင့်လုလင်တို့သည် emasculating အလွန်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါး။ ဆီးရောဂါပါရဂူရှင်ပေါလုဘုရားကျောင်း, Maureen Newberg LCSW (2019)
မည်သို့ကြောင့်လိင်ကုထုံးဖြစ်ခံစားရပါတယ်။ လိင်ကုထုံးပတေရုသ Saddington (2019)
မျိုးဆက်လာသောသေတ္တာ: Porn စွဲငါ့ကိုအလုပ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသက်သာရာပေမယ့် '' ပုံမှန် '' မိန်းကလေးများနှင့်အတူအိပ်ရာထဲမှာလာသောသေတ္တာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဂျက်ဖ် Foster, MD (2019)
ညစ်ညမ်းအကြောင်းမရှိခွန်အားမရှိခြင်းကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါသလား? ဒေါက်တာဒေးဗစ် Greenfield, (2019)
Porn အကြောင်း Erectile အလုပ်မဖြစ်သလော Alvaro Ocampo MD (2019) က
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရယူခြင်းအပေါ် lowdown ။ အမျိုးသားကျန်းမာရေး Nick Knight, MD, PhD ။ (2019)
စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ကကွာရှင်းထားသောအမျိုးသားများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်မရောင့်ရဲသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်လိင်အင်္ဂါချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ စိတ်ပညာရှင် Felix Economakis (2019)
ကောလိပ်တွင်လိင်၊ စိတ်ပညာပါမောက္ခ Marie Damgaard, (2019)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုငယ်ရွယ်သောပြည်နယ်သို့ ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွပေးသည်။ ရာခေလအန်းဘားမှ PhD ကျောင်းသား၊ အာရုံကြောသိပ္ပံ၊ Université Laval (2019) မှ
porn- သွေးဆောင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ Clare Faulkner, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုသသူ (2019)
AX နှင့် 'Sex Education' တို့သည်အတူတကွလာကြပြီး Gen Z ယောက်ျားများအားယုံကြည်မှုရှိစေရန်ကူညီသည်။ Jessie Cheung, MD (၂၀၂၀)
သောမတ်စ်ဂျီ။ ကင်ဘားလ်၊ Ph.D, LMFT (၂၀၂၀) ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှအလွန်စွဲလမ်းစေသနည်း
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွဲစွဲလမ်းမှုသည်ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများကြားတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ပညာရှင် Alaokika Bharwani; စိတ်ရောဂါပညာရှင်နှင့်လိင်ပညာရှင် Pavan Sonar (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း၏တန်ဖိုးသည်ကလေးများအားလိင်အကြောင်းသင်ကြားပေးသည်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာရှင် Robyn Salisbury (၂၀၂၀)
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကျဆင်းစေသည်။ စိတ်ပညာရှင် Arti Anand, အတိုင်ပင်ခံစိတ်ရောဂါအထူးကု Sanjay Kumavat, လိင်စိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါအထူးကု Ashish Kumar Mittal (2021)
စိတ်ပညာပါမောက္ခ Sam Vaknin က Porn သည်လိင်ကိုဘယ်လိုဖျက်ဆီးခဲ့သလဲ
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု & ပုံမှန်မဟုတ်သောကုသမှု 3!
ကူညီပါ! ငါ porn ဖြတ်သော်လည်းငါ့အာနိသင်, လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနှင့် / သို့မဟုတ်လိင်စိတ် (Flatline) လျော့ကျလာနေကြတယ်
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူရှည်လျားလွန်းလမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။
porn-သွေးဆောင် ED (အပိုင်း 4) ကိုအမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာပေးအပ်သည်။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha
အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာတင်ဆက် porn-သွေးဆောင် ED ။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha (ဗီဒီယို)
Porn-ED ထုတ်ပေးသည့် ED: လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား (သံသယ ၀ င်သူများအတွက်)
ရရှိနိုင် RebootNation.org Speakers
ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေပုံမှန်မဟုတ်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ်? (စိတ်ထိခိုက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ Syndrome)